Panasonic က Chip Mounter CM602-L ကို China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Panasonic က Smt စက် CM602-L ကို,Panasonic က Chip Mounter စက်,Pick နှင့်နေရာစက် Smt
Home > ထုတ်ကုန်များ > Panasonic က Chip Mounter > Panasonic က Chip Mounter CM602-L ကို
အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic က
ဆိပ်ကမ်း: Hong Kong
အင်္ဂါရပ်များ & အကျိုးကျေးဇူးများ
linear မော်တာ drive ကိုယုံကြည်စိတ်ချတိုးပွါးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့ကျစေပါတယ်
"x 20" ပျဉ်ပြားအထိ 18 ရက်နေ့တွင် 90 x ကို 100mm မှ 0402 (01005) ချစ်ပ်အနေဖြင့်ကျယ်ပြန့်အစိတ်အပိုင်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှု
Matsushita Mounter CM602, CM602-L ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Module Mounter Features:
1. XY ပုဆိန် CM602 များအတွက် * ခိုင်မာတဲ့ပါဝါပေးထားတဲ့ * အသစ်က linear မော်တာ, တပ်ဆင်ထားကြသည်။
3. XY ဝင်ရိုး၏ရွေ့လျားမှုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အနိမ့်တုန်ခါမှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
4. linear မော်တာကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာအအေးနိုင်သည့်သစ်တစ်ခုအအေးဒီဇိုင်းအစီအစဉ်ချမှတ်နှင့်
ထိထိရောက်ရောက်နဲ့အခြားပစ္စည်းကိရိယာများထက်သေချာ, မြန်နှုန်းမြင့်လှုပ်ရှားမှုအောက်တွင် linear မော်တာကိုအသုံးပြုပြီး
ထိန်သိမ်း၏ 5.7 အမျိုးမျိုး 104mm မှ 8 မီလီမီတာကနေအားလုံးကျစ်ထုတ်ပိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုက်ညီတဲ့နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ကကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ နှင့်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားအရသိရသည်အသစ်တစ်ခု 8 မီလီမီတာလူပျိုထိန်သိမ်းကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
6. ပစ္စည်းအလုံးစုံထောက်ခံမှု pin ကိုဒီဇိုင်းကူးပြောင်းခြင်းခြုံငုံပုံဖမ်းတွန်းလှည်းဒီဇိုင်းကူးပြောင်းခြင်းသည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်း switching ထိန်သိမ်း
7. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနေစဉ်, CM402 ၏ရင့်ကျက်ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုသည်,
CM402 အတူ Interchange သေချာစေရန် Hardware နဲ့စစ်ဆင်ရေး။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : Panasonic က Chip Mounter
Panasonic ကနေရာထားရှိစက် NPM-D3 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Chip Mounter NPM-TT အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကနေရာထားရှိစက် NPM-W အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကနေရာထားရှိစက် NPM-W2 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Chip Mounter CM602-L ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Chip Mounter CM402-L ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Chip Mounter NPM-D ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Smt စက် CM602-L ကို Panasonic က Chip Mounter စက် Pick နှင့်နေရာစက် Smt Panasonic က Smt စက် CM402 nozzle Panasonic က INSERT စက် Cutter Tool ကို Panasonic က Smt စက် Panasonic က INSERT စက် CM402 Panasonic က INSERT စက် RL132 အပိုင်း